Taliska Ciidanka Asluubta oo ka digay in la boobo dhulka uu gobollada ku leeyahay – Radio Muqdisho
Taliska Ciidanka Asluubta oo ka digay in la boobo dhulka uu gobollada ku leeyahay
Taliska Ciidanka Asluubta ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka waantoobaan boob uu sheegay in lagu hayo dhulka uu lahaa ciidankaasi eek u yaalla gobollada dalka.
Taliyaha ciidanka Asluubta General Xuseen Xasan Cusmaan, oo kormeer ku tagay xarumo ay asluubtu leedahay oo ku yaalla gobolka Banaadir iyo Shabeellaha Hoose ayaa tilmaamay in uu soo baxay cadow cusub oo doonaya inuu boobo dhulka ay dowladdu leeydahay.
“Waxaan u taagannahay inaan cadowga dhulka inuu qaato rabto aan difaacno, ma oggolin in la boobo dhulka ciidanka asluubtu leeyihiin, waana u taagannahay arrintaas” ayuu yiri Generaal Xuseen Xasan Cusmaan.
Taliye ku xigeenka ciidanka Asluubta Cabdikariim Cabdi Afrax ayaa isaguna yiri “Fariin ayaan u dirayaa dadka boobaya dhulka dowladda ay leedahay, kuwo dhulka ciidanku lahaa boobayo waxaan uga digayaa in hunguri uusan ka galin dhul dowladdu ama shacabkuba leeyahay”.
Hiiraan: Askar AMISOM ka tirsan oo xaflad sagootin ah loo sameeyay